Wasiirka Waxbarashada oo sheegay in ardayda baladweyne oo gaareysa 1400 laga reebay ka qeybgalka intixaanada | Somalisan.com
Home Afsomali Wasiirka Waxbarashada oo sheegay in ardayda baladweyne oo gaareysa 1400 laga...
Wasiirka Waxbarashada oo sheegay in ardayda baladweyne oo gaareysa 1400 laga reebay ka qeybgalka intixaanada
C/raxmaan Daahir Cusmaan Wasiirka Waxbarashada xukumadda fedraalka Soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa faafaahin dheeraad ah ka bixiyay imtixaanka dugsiga sare ee dowlada ee sanadkaan.
Wasaarada Waxbarashada oo horay u shaacisay in imtixaanka dowlada ay sanadkaan u fadhiisanyaan 27,600 oo arday ayaa maanta Wasiirka wuxuu tilmaamay 1400 oo arday oo ku sugan magaalada Beladweyne dib loogu dhigay imtixaank dowlada, islamarkaana laga qaadi doono imtixaanka markii magaalada ay ku soo laabato sideedii hore.
Imtixaanka dowlada ayaa bilaabanaya 19-05-2018 oo ku beegan sabtiga soo socda, iyadoona lagu gali doono 120 xarumood oo ku yaala gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka.
Wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa Sheegay in Markii ugu horeeysay Imtixaanka lagu diyaariyay gudaha dalka tan iyo burburkii Dowladdii dhexe, iyada oo markii hore ey diyaarinjirtay hayadda Waxbarashada Iyo Dhaqanka uqaabilsan Qaramada Midoobey ee UNESCO.
Previous articleDuuliye Asli Xasan Cabaade oo fariin Khiiro wadaniyad leh u soo dirtay dhalinyarada Soomaaliyed (Akhriso)
Next articlebambooyin hoobiyeyaal iyo Weeradii Bisha Ramadaan oo Muqdisho ka bilowday iyada oo la sheegayo in amaanka si aad ah loo adkeeyey
Tilmaamaha uu leeyahay Guddoomiye Kuxigeenka Maamulka iyo Maaliyada Gobalka Banaadir Mudane Abduqaadir Maxamed Maxamuud...
Somalisan News - May 10, 2021